ktmkhabar.com - योगेशले बन तस्कर भनेपछि मन्त्री आले एक्सनमा, योगेश मन्त्री हुँदाको अर्को काण्डमा छानबिन गर्दै !
योगेशले बन तस्कर भनेपछि मन्त्री आले एक्सनमा, योगेश मन्त्री हुँदाको अर्को काण्डमा छानबिन गर्दै !
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले अहिले चर्चाको शिखरमा छन् । आफ्नो मन्त्रालय अन्तरगतका विभिन्न विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा मन्त्री आले मैदानमै एक्सनमा उत्रिन थालेका छन् । मैदानमै उत्रिएर विभिन्न विसङ्गतिका विरुद्ध खरो अभिव्यक्ति दिँदै उनी चर्चामा आएका छन् ।
पछिल्लो समय तत्कालीन अवस्थामा योगेश भट्टराई मन्त्री हुँदा नारायणहिटी दरबारमा क्यान्टिन चलाउन बतास समूहलाई स्वीकृति दिएको भन्ने चर्चा चलेका बखत योगेशले मन्त्री आलेलाई बन तस्करको आरोप लगाएपछि मन्त्री आलेले योगेश भट्टराई मन्त्री हुँदा भएको अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न समिति नै बनाएका छन् ।
योगेश भट्टराई मन्त्री भएका बखत कोरोना संक्रमण फैलिएपछि विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने क्रममा उद्धार उडानमा अनियमितता भएको आशंका सहित आलेले समिति गठन गरेका हुन् ।
मन्त्री आलेले बिहीबार सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका छन् । समितिमा प्रेमनाथ ठाकुर र टेकनारायण पौडेल सदस्य रहेका छन् । समितिलाई १० दिनमा प्रतिवेदन दिन भनिएको छ ।
मन्त्री आले सँग पूर्व मन्त्री तथा एमाले नेता योगेश भट्टराई रुष्ट बनेका बेला आले एक्सनमा उत्रीएका हुन । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा विदेशमा फसेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनका लागि सरकारले उद्धार उडान गरेको थियो । त्यसमा नेपाल एयरलाइन्सका र हिमालय एयरलाइन्सले चार्टर फ्लाइट बाट नेपालीलाई नेपाल फर्काइएको थियो ।
ती चार्टर फ्लाइटमा अनियमितता भएको हल्ला तत्कालीन अवस्थामै भएका थिए । त्यसको छानबिन गर्नका लागि अहिले मन्त्री आलेले समिति गठन गरेको जनाइएको छ ।
मन्त्री प्रेम आलेयोगेश भट्टराई